Nagu saabsan - HEYPACK CO., LIMITED
HEYPACK CO., XADDIDAN
Waxaan nahay xirfadle soo saare baako qurxiyo.
Kooxda naqshadeynta hal abuurka ah iyo koox xirfadlayaal iib ah oo ku taal Yiwu Zhejiang.
Waxaan qaadaneynaa mas'uuliyado cayn kasta ah, waxaan ku dheganahay riyadeena.
Baahiyaha ayaa go'aamiya wax walba. Kooxuhu waxay guuleystaan ​​mustaqbalka. Inaad noqotid qof xirfad leh, daacad ah, hal abuur leh, iyo in lala wadaago waa aaminaadeena.
Inaad noqoto kaaliyaha iibsiga macaamiisha iyo bixinta alaab tayo sare leh waa waxyaabo xiiso leh annaga.
HEYPACK waxay bilaabeysaa baakadaha qurxinta qurxinta ee ganacsiga ajaanibta sanadkii 2009. Ilaa iyo hada HEYPACK waxay leeyihiin nidaam wax soo saar iyo shixnad dhameystiran. Caaga & birta & warqada & aruurinta alaabta bamboo, dhalada afuufa & cirbadeynta, dusha sare sida electroplating, dhaxan, xardho, buufin Daabacaadda Logo sida shaashadda, dejinta, shaabad kulul, wareejinta biyaha, calaamadeynta. Ka sokow, Muunad bilaash ah, shixnadaha badda ee DDU, shixnadaha hawada ee wax-ku-oolka ah. Bartilmaameedkeenna ugu dambeeya ayaa ah lamaanahaaga ganacsi ee lagu kalsoon yahay!
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarnay waa tuubooyinka PE ee la isku qurxiyo, tuubooyinka aluminium-caag ah ee dahaarka leh, PE & PET dhalooyinka wax afuufaya, dhalooyinka aan hawada lahayn & dhalooyinka kareemka leh, dhalooyinka dhalada & aluminiumka ah, qurxinta iyo baakidhka cadarka.
Waxaan lasiinay weel habeysan oo karti-sare leh.
Waxaan nahay kaaliyaha wax iibsiga xirfadeed ee macaamiisha.
- Kuwaani waa shaqo leh dareen guul.
Waxaan sugeynaa inaan si daacad ah aan kulashaqeyno.